Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၉)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၉)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၈)
Fr. Peter U Myo Aung
ဖါသာရ် ပီတာ ဦးမျိုးအောင်သည် (၁၉၆၀) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် တန့်ဆည်မြို့နယ် ချောင်းရိုးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဗေဒါနှင့် ဒေါ်အေးရီတို့ဖြစ်သည်။ သားသမီး (၁၀)ယောက်အနက် သားဦး ရတနာဖြစ်သည်။ ချောင်းရိုးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် သင်ပြီးနောက် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ အမှတ်(၃) အထက်တန်းကျောင်းမှ (၁၀)တန်း အောင်ပြီးနောက် (၁၉၈၀)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် (၁၉၈၉)ခုနှစ် အထိ ရဟန်းတို့တတ်အပ်သော ပညာရပ်များ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၉)ခု အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦုးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့ပြီးနောက် ချင်းသာသနာနယ် ကလေးမြို့အုပ်စုတွင် တနှစ်တာမျှ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၄င်းနောက် (၁၉၉၀)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂) အထိ ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဇော်ဂျီရွာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ကျောက်ဆည်၊ မြစ်ငယ်၊ မြောက်ကိုင်း၊ ချမ်းသာကုန်း၊ ဆင်ဖြူ၊ မြစ်သား၊ ကူမဲ၊ မန်ကျည်းတောရှိ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဂျွန်လမှ စ၍ ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းသည်။
Fr. Dominic Sling Joy Tu
ဖါသာရ် ဒေါမနစ်ဆလိုင်း ဂျိုတုသည် (၁၉၆၀) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ချင်းညောင်ပင်သာရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်သောင်းတို့ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်အခါတွင် ကုက္ကိုကုန်းရွာမ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ဘ၀ဖြင့် ဆွမ်းခံရင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ရှင်ဦးမိတ္တ၏ ဝေယျာဝစ္စ ထမ်းဆောင် စာသင်ရင်း (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် မူလတန်းအောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၂) ခုနှစ်တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ခဲ့သည်။ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်သည်အထိ ပညာသင်ပြီး (၁၉၈၀)ခုနှစ်တွင် ကိုရင်သင်္ကန်း ရရှိခဲ့သည်။
ထိုမှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်သင်ကြားရင်း တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့ရာ သိပံ္ပဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၈၉)ခု ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့ မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း စိန်ရတု ဂျူဗလီပွဲတော်တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းညောင်ပင်သာ ကက်သလစ်သာသနာနှစ် (၅၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်တွင် မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အာလ်ဖုန်းဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
(၁၉၉၁) ခုနှစ်မှ စ၍ မန္တလေးမြို့ စိန်မိုင်ကယ်အုပ်စု ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ သံဝင်းရပ် ဘာသာဝင်အုပ်စုကို ကြည့်ရှုရစဉ် ဘုရားကျောင်းအတွင်း တာရာဆိုခင်း၍ ဘုရားကျောင်း ပတ်လည်အုတ်များ ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ နှလုံးကြေကွဲ မယ်တော် (Divine Mercy) ရင်ပြင် ကျောင်းဆောင် ရေတံခွန်၊ နှစ်(၂၀၀၀) အထိမ်းအမှတ် လက်ဝါးကပ်တိုင်၊ ရေကန်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် အသေခံခြင်း၊ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်၊ စိန်အဲန်ရုပ်တုများ မာရီယား တမန်တော် နှစ်(၅၀) တံခွန်အလံများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မယ်တော်၏ဂူကို ပြန်လည်ပြုပြင်၍ ကြွေပြားများ ကပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း အုန်းပင်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာတစ်ဦး ခန့်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ နိဗ္ဗာန်ဆော်ကား တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘင်ခရာတီးဝိုင်း ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်နှင့် စည်းဝေးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခု ဇွန်လမှစ၍ မုံလှရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ရေဒီယိုဗေရိတာစ် မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
ဖါသာရ် စီပရီယမ် ဦးအောင်ဝင်း
Fr.Cyprian U Aung Win
ဖါသာရ်စီပရီယမ် ဦးအောင်ဝင်းသည် (၁၉၆၄)ခု စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးသန်းမောင် ဒေါ်မြရွှေတို့ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာရွာ၌ (၈)တန်းအောင်မြင်သည် အထိ ပညာသင်ကြားရင်း ဘာသာရေး အခြေခံအသိပညာများကိုလည်း ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ ဓမ္မဆရာများထံမှ သင်ကြား နာယူခဲ့ရသည်။ ငယ်စဉ်က ရဟန်းဖြစ်လိုသော ဆန္ဒ ပြင်းပြခဲ့သည့် အလျောက် (၁၉၇၉)ခုနှစ် (၁၀)တန်း ရောက်သည့်အခါ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ စိန်အာလောရှက် အခြေခံ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
(၁၀) တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် (၁၉၈၁)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီသို့ ၀င်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ်များကို စွမ်းစွမ်းတမံ လေ့လာ ဆည်းပူးအောင်မြင်ပြီးနောက် (၁၉၉၂)ခု သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ ဦးပဉ္စင်းကြီးဘ၀နှင့် (၆)လတာနေရသည့် ကာလတွင် အဓိကအားဖြင့် ချမ်းသာရွာ ဆွေမျိုးဆက် ထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် ဆရာတော်အား လက်လှမ်းမိသမျှ လေ့လာ ကူညီခဲ့သည်။ ဦးပဉ္စင်းကြီးဘ၀၌ပင် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ယင်းတွေရွာသစ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိမ်မြုပ်နေခဲ့သော ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များထံသို့ သွားရောက်နေထိုင်ကာ တရင်းတနှီး အားပေး စည်းရုံးခဲ့သည်။ (၁၉၉၃) ခု မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားရာ ဇာတိဖြစ်သော ချမ်းသာရွာ၌ပင် အဖဆရာတော် အာလ်ဖုန်းဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းဘ၀ဖြင့် ရွှေဘိုသာသနာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဟံလင်းမြို့ဟောင်းမှ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ခန့် အဆက်အသွယ်ပြတ်ခါ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေသော ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များနှင့် ရက်အနည်းငယ် သွားရောက်နေထိုင်ကာ ဘာသာရေး အခြေခံသဘောတရားများကို သင်ကြားပေးရင်း၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ကညုဦးလွန်းအောင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားသဖြင့် ယင်းအုပ်စု ဘာသာဝင်များကို (၁၀)လကြာ ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။
ထိုနောက် မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် လက်ထောက်အဖြစ် အမှုထမ်းရင်း မိထ္တီလာ၊ သာစည်၊ ရမည်းသင်း ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ (၁၉၉၇)ခုနှစ် မေလတွင် အီတလီပြည် ရောမမြို့ရှိ (ALFONSIANA UNIVERSITY) အာလ်ဖွန်စီအားနား တက္ကသိုလ်တွင် (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၁)ခုနှစ်အထိ သင်ကြားခဲ့ရာ (၂၀၀၁)ခုနှစ်တွင် (Moral Theology) ပါရဂူဘွဲ့(Ph.D) ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) မေလမှ စ၍ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ကျောင်းအုပ်အဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
င်္Fr. Paul U Tun Myint
ဖါသာရ်ပေါလ် ဦးထွန်းမြင့်သည် (၁၉၆၄)ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် မုံလှရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးပို ဒေါ်ထန်တို့ ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထတန်းအောင်သည် အထိ မုံလှရွာ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၄)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ မေမြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၁) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်းအောင်သည်။ (၁၉၈၁) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၂)ထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ်များ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၃)ခုနှစ် မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် မုံလှရွာ၌ မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၏ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် လက်ထောက်အဖြစ် တနှစ် အမှုထမ်းပြီးနောက် (၁၉၉၄) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂)ခုနှစ်အထိ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် မေလမှ စ၍ ချမ်းသာရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းခဲ့ရသည်။ နိုဝင်ဘာလမှ စ၍ ချမ်းသာရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ချောင်းရိုး၊ ရေဦး၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဒီပဲယင်းရှိ ဘာသာဝင်များကိုပါ ကြည့်ရှုရသည်။ ချမ်းသာရွာ၌ သီတင်းသုံးစဉ် (၁၀)တန်း ကျောင်းသား (၉၀)ခန့်ကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ရေဦးတွင် ဘော်ဒါကျောင်းဆောက်လုပ်၍ ချမ်းသာရွာ၊ ရေဦး၊ မုံလှ၊ ချောင်းရိုး၊ ရွာတော်မှ ဘာသာဝင် ကျောင်းသားများ (၄၀)ခန့် လက်ခံ၍ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ရှုပဗေဒဘာသာရပ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်များကို ကိုယ်တိုင် သင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့သည်။ ရေဦးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးနေ ကျောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ရေဦးမြို့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကောင်းကြီးပေးပွဲနှင့် ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်ပွဲကို အပြိုင်တည်း ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့သည်။
Fr. Cyril U Myint Soe
ဖါသာရ်ဆယ်ရယ် ဦးမြင့်စိုးသည် (၁၉၆၄)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးစင်း၊ ဒေါ်ခင်လှတို့ ဖြစ်သည်။ မိခင်ကွယ်လွန်ပြီး သုံးနှစ်သားအရွယ်တွင် ဆရာဦးညီညီ-ဒေါ်ပြုံးတို့မှ မွေးစားပြီး ကျောင်းထားပေးခဲ့သည်။ (၁၉၇၈)ခုနှစ် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၂) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်းအောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ်များ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၃)ခု ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာကို မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ခံယူရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခု ဧပြီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတော် အခမ်းအနား၌ ရဟန်းသိက္ခာကို ဆရာတော်အေ ဦးသန်းအောင်လက်တော်မှ ခံယူရရှိခဲ့သည်။
ရဟန်း သိက္ခာခံယူပြီးနောက် ရွာတော်ရွာတွင် (၃)လ သီတင်းသုံး နေထိုင်ခဲ့သည် (၁၉၉၄) မှ (၁၉၉၇) ခုနှစ်အထိ မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း လက်ထောက်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း မိထ္တီလာ၊ သာစည်၊ ရမည်းသင်းသာသနာရှိ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ ရမည်းသင်းသာသနာကို အသစ်ပြုပြင် ဖန်တီးမှုများ ပြုလုပ်ရသည်။ (၁၉၉၈) မှ (၂၀၀၂) ခုနှစ်အထိ မိထ္တီလာဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ (၂၀၀၂) ခုနှစ် ဧပြီလမှ စ၍ ဇော်ဂျီရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ဇော်ဂျီ၊ မြောက်ကိုင်း၊ မြစ်ငယ်၊ ဆင်ဖြူ၊ မကျည်းတော၊ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ မန္တလေးသာသနာ ကရုဏာအသင်း၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည်။
ဖါသာရ်ဆယ်ရယ် ဦးမြင့်စိုးသည် စာပေ၀ါသနာပါသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကြိုးကြာ၊ နီလာစိုး၊ သူရိန်စိုး ဟုသော ကလောင်အမည်များဖြင့် ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ““နေ့စဉ်မစ္ဆားတရား၌ အသုံးပြုသော ဆာလံများ””ဟု အမည်ရသော စာအုပ်ကိုလည်း ရှာဖွေပြုစု ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ ခဲ့သည်။
Fr. Martin U Kyaw Ning
ဖါသာရ်မာတင် ဦးကျော်နိုင်သည် (၁၉၆၂) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးညွှန့်မောင်ဒေါ်ခင်အေးတို့ ဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးမြို့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် (၁၀)တန်းအောင်သည် အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၉)ခုတွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၃)ခုတွင် ကိုရင် သင်္ကန်းရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်
တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၄-၈၅)တွင် မန္တလေး ပြန်လာပြီး စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၆)ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
(၁၉၈၇) မှ (၁၉၈၉) အထိ ပြင်ဦးလွင် ဖီလော်ဆော်ဖီ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်၌ သီအိုလိုဂျီပညာကို (၁၉၈၉) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၃)ခုနှစ် အထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခု ချမ်းသာရွာ ဘုရားကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူပြီး (၁၉၉၄) နိုဝင်ဘာ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ချောင်းဦးမြို့၌ ဆရာတော်အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် (၁၉၉၅) ဇန်န၀ါရီလတွင် စတင်၍ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် သရက်ခုံကျေးရွာ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် အမှုတော်ထမ်းခဲ့သည်။ သရက်ခုန်ရွာ မယ်တော်ဂူလိုင်နှင့် ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နွေရာသီတွင် ကလေးများကို (၅)တန်းမှ (၁၀)တန်း အထိ စာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဂျွန်လတွင် ရွှေဘိုမြို့နယ် ရွာတော်ရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ ရွာတော်ရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၃၈)အိမ်ရှိသည်။ ရပ်ကွက် (၆)ရပ်ကွက်ခွဲထားသည်။ ရွာတော် ဘာသာဝင်များ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ၀က်လိုင်စင်ကို တာဝန်ယူ၍ ဆွဲပေးထားနိုင်ခဲ့သည်။ နွေရာသီတွင် (၅)တန်းမှ (၁၀)တန်းအထိ ကလေးများ စာသင်ကြား ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျင် တစ်လ (၅၀)ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံ၍ လူကြီးတစ်ဦး ကွယ်လွန်လျှင် (၅၀၀၀)ကျပ် ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။
Fr. Nicholas U Pyaohn Cho
ဖါသာရ်နီကောလပ်စ် ဦးပြုံးချိုသည် (၁၉၆၃)ခု စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဘချို ဒေါ်ညိုတင်တို့ဖြစ်သည်။ ရေဦးမြို့ အမှတ်(၁) အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် သတ္တမတန်းအောင်သည် အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ (၁၉၇၈)ခု မေလတွင် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ အမှတ် (၃)အထက်တန်းကျောင်းမှ (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။
(၁၉၈၂)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီသို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ရာ ဖီလော်ဆော်ဖီဘာသာရပ် မပြီးခင် မန္တလေးသို့ ပြန်လာပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၇)တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၈၈)မှ စ၍ ဖီလော်ဆော်ဖီ (၂)နှစ် ပြန်သင်ခဲ့ရသည်။ (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ်မ စ၍ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်၌ သီအိုလိုဂျီပညာ ဆက်လက်သင်ခဲ့ရာ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် ပြီးခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေဦးမြို့၌ ဆရာတော် အာလ်ဖုန်းဦးသန်းအောင်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ချင်းညောင်ပင်သာရွာ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် သာသနာအမှုတော် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သဲဖြူနှင့် ချင်းသပြေပင်ရွာများကို ကြည့်ရှုရသည်။ သဲဖြူတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် ပစ္စည်းများ စုဆောင်း၊
အုတ်မြစ်ချနိုင်ခဲ့သော်လည်း အထက် အာဏာပိုင်တို့၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိသဖြင့် ဆက်လက် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ (၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင် နဘက်ရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
င်္Fr. Augustine U Win Shwe
ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးဝင်းရွှေသည် (၁၉၆၁)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ချောင်းဦးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးသိန်းဌေးနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းတို့ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း (၉)ယောက်ရှိသည် အနက် တတိယသားကြီးဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးမြို့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၄) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်၍ ထိုနှစ်မှာပင် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၆) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရာယ်ဘုရားကျောင်း အနီးရှိ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးနှစ် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် (၁၉၈၈)ခုနှစ် တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ရှုတ်ထွေးမှုများ ဖြစ်လာသောကြောင့် မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရက စာသင်ကျောင်းများကို သုံးနှစ် သုံးမိုးပိတ်ထားသောကြောင့် (၁၉၉၁)ခုနှစ် ရောက်မှ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
(၁၉၈၉-၉၀) နှစ်များတွင် မေမြို့ (ပြင်ဦးလွင်)ရှိ ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် ဒဿနိကဗေဒ ဘာသာရပ် (Philosophy) ဘာသာရပ်ကို အဓိက သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၂) မှ (၁၉၉၆) ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဘာသာဗေဒ (Theology) ပညာရပ်ကို အဓိက သင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၉၆)ခုနှစ် မေလ (၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၉၆)ခု နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောင်မြို့နယ် နဘက်ရွာ စိန်ဂျွန်ဗပ္ပတစ္စဘုရားကျောင်းတော်၌ မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
(၁၉၉၇) ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးစို ပျံလွန်တော်မူသဖြင့် ထိုနှစ်မေလမှ စ၍ စိန်ဇေးဗီးယားအုပ်စု ဘာသာဝင်များကို တာဝန်ယူ ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ (၂၈.၈.၉၇) နေ့တွင် မြစ်ငယ်မြို့မှ ဦးမြင့်ဝေ+ဒေါ်နုတို့က စိန်ဇေးဗီးယားကျောင်းအတွက် ရေခဲသေတ္တတစ်လုံး လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဦးဝင်းရွှေသည် (၁၉၉၇)ခုနှစ်တွင် စိန်ဇေးဗီးယာုးသာသနာ့ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး သာသနာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၇) ခု ဇွန်လတွင် ဘုရားကျောင်း ရှေ့ပိုင်း ကျောက်ပြားများ ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အင်ပလီဖိုင်းယား (၂)လုံးနှင့် ဆောင်းဘောက် (၂)လုံးဝယ်ယူ၍ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်မီး အချိန်မှန်မရရှိသဖြင့် (၁၉၉၈)ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်မီးစက် (၂)လုံးဝယ်ယူ၍ ဘုရားကျောင်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မီးဆိုင်း(၉)ခုကိုလည်း ဘုရားကျောင်း၌ တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းကိုလည်း ဆေးသုတ် မွမ်းမံခဲ့သည်။ (၁၉၉၉)ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်းဝင်းတခုလုံး အုတ်ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ အလည်သွားရောက်စဉ် မယ်တော်၏ပုံနှင့် ခရစ်တော်၏ ပုံတော်ကြွေပြားများ ၀ယ်ယူလာပြီး စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း ဘုရားစင်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ မယ်တော်၏ မွေးနေ့ရက်များတွင် ဘုရားကျောင်း တက်ရောက်သူများပြား၍ ထိုင်ခုံများ မလုံလောက်သဖြင့် အပြင်မှ ငှားရမ်းအသုံးပြုခဲ့ရသည်။ (၁၉၉၉) ခုနှစ် မယ်တော်မွေးနေ့ပွဲတော်တွင် ထိုင်ခုံများ ငှားရမ်းအသုံးမပြုတော့ဘဲ နောင်အစဉ် အသုံးပြုသွားရန် ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံ (၅၀၀)ကို ကျောင်းပိုင်အဖြစ် ၀ယ်ယူအသုံးပြုခဲ့သည်။(၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် ဧပြီလတွင် ဗေလန်ကန်နီမယ်တော်၏ အဆောင်တော်ကို အောက်ကြမ်းပြင်နှင့် အပြင်နံရံများကို ကျောက်ပြား အသစ်များခင်းသည်။(၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ဘုရားစင်ခန်း ကျောက်ပြားများ ခင်းခဲ့သည်။ (၁၃.၈.၂၀၀၁)နေ့တွင် လှံ (၇)စင်း မယ်တော် (နာကျင်ခြင်း ၇ထွေမယ်တော်) ဗိမာန်တည်ဆောက်၍(၈.၉.၂၀၀၁) နေ့တွင်၊ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် ကိုယ်တိုင် ကောင်းကြီးပေး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၁) ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘုရားကျောင်းကြမ်းပြင် အားလုံးကျောက်ပြားများ ခင်းရာ (၂၁.၁၂.၂၀၀၁)နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဦးဝင်းရွှေသည် (၂၀၀၂)ဇွန်လမှ စ၍ ချောက်မြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၃၀)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:30 PM
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (နောက်...